Artificial grass - artificial turf - synthetic grass - fake turf - BaganMart
Denyo Super Soundproof Generator မီးစက်
INDUTHERM Automatic Vacuum-Pressure-Casting machine VC 450
Gasoline Engine All Power
ကွညျ့ရှု့သူ အရအေတှကျ : 401 view counts
Artificial grass - artificial turf - synthetic grass - fake turf
စြေးနူနျး : 1 - 1000 $ per Meter(s)
အနညျးဆုံး အရအေတှကျ : 100 Meter(s)
Brand : HCTL
Model : No. 01
လုပျငနျးအမညျ : နန်းမြင့် သံဇကာ လုပ်ငန်း Unverified Member
ဖုနျးနံပါတျ : 09971012231/09263648171
special,2m*25m per roll or 4m*25m per roll(according to customer requirements)
artificial grass, artificial football turf,artificial football grass, for football,soccer or landscaping Material: PE,12000 detex, monofilament straigt turf
Colour: Field green, olive green or bi-tone green
3/8" 3/4" 5/8" 3/16"Gauge
Stitches: 16 stitches/10cm
Softness:Create soft and comfortable feeling to avoid skin burn.
UV-Stabiity 10+ years
Factory's warranty: 8 years
Perfect for landscaping and sports
Unique products in the world.
ကျွန်တော်များ နန်းမြင့် Enterprise မှ တပိုင်တနိုင်ဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်လိုသော မိတ်ဆွေများ အတွက် ( သွင်းကုန် အစားထိုးစက်မှုလုပ်ငန်း အဖြစ် ) အိမ်ခြံစည်းရိုးသံဇကာ ချိန်းလိတ်စက် ( Digital Chain Link Fence Machine) များအား မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
မိတ်ဆွေများ အနေဖြင့် ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းလုပ်ရန် စိတ်ကူးရှိပြီး အစပြုရန် ခက်ခဲနေပါက ကျွန်တော်များ Nan Myint Enterprise မှ စီးပွားရေး အကြံဥာဏ် ပေးပါရစေ။
မိတ်ဆွေများ အနေဖြင့် နေ့ စဉ် ၀င်ငွေသိန်းကျော်ရရှိပြီး လူအင်အားများစွာ သုံးစရာ မလိုသော စီးပွားရေးအနေဖြင့် အိမ်ခြံစည်းရိုးသံဇကာ ချိန်းလိတ်စက် (Digital Chain Link Fence) လုပ်ငန်းလေးသည် အထူးပင်သင့်တော်ပါသည်။
အရစ်ကျ စနစ်ဖြင့်လည်း ဝယ်ယူရရှိ နိုင်ပါသည်။
၁။ အိမ်သုံးမီတာ (Single Phase) ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊
၂။ လုပ်ငန်း အန္တရာယ် မရှိခြင်း၊
၄။ ဈေးကွက် အမြတ် တွက်ခြေကိုက်ခြင်း၊
၆။ ကုန်ကြမ်းလွယ်ကူစွာ ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ခြင်း၊
၇။ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာနည်းပညာများ ကို ကျွမ်းကျင် တတ်မြောက်သည် အထိသင်ကြားပေးခြင်း၊
၈။ Digital စနစ်ဖြစ်သောကြောင့် ( လိုအပ်​​သော​ပေအရှည်​အတိုင်း နံပါတ်​များကို ) လိုသလို လွယ်ကူစွာ ပြောင်းလဲ မောင်းနှင်နိုင်ခြင်း၊
၉။ သွင်းကုန် အစားထိုးစက်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း
၁၀။ ပြည်တွင်းဖြစ် ဖြစ်သောကြောင့် ဝယ်ယူပြီးနောက်ပိုင်း ဝန်ဆောင်မှု လွယ်ကူစွာရရှိခြင်း
၁၁ ။ Digital စနစ်ဖြစ်သောကြောင့် က​လေး / လူကြီး မည်​သူမဆို လွယ်​ကူစွာ စတင်​ထုတ်​လုပ်​နိုင်​ခြင်း
၁၂ ။ Digital စနစ်ဖြစ်သောကြောင့် မီတာခ 50 % သက်​သာခြင်း
၁၃ ။ လျှပ်​စစ်​မီးမရရှိနိုင်​​သော​နေရာများတွင်​ အခြားနည်း
များဖြစ်​​သော ဓာတ်​ဆီ / ဒီဆယ်​ အင်​ဂျင်​ (သို့) ဆိုလာ စနစ်​များ အသုံးပြု၍ တပ်​ဆင်​​ပေးခြင်း နှင့် အခြားအကျိုးကျေးဇူးများစွာ - -- ---
အစရှိသော အားသာချက်များကြောင့် လုပ်ငန်း သစ် နည်းပညာ သစ်ဖြင့် မိမိတို့ ၏ လုပ်ငန်းရှင် အိပ်မက် ကိုအကောင်အထည်ဖေါ်လိုက်ကြပါစို့ ။ ဈေးကွက် အမြတ်တွက်ချက်နည်းများ ကို အသေးစိတ် ဖုန်းဆက်ရှင်းပြပေးပါသည်။
Private Message နှင့် Comment Box မှ အဆင့်လည်း ဈေးနှုန်းများ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ph - 09971012231 , 09263648171 , 09797744339
နန်းမြင့် သံဇကာလုပ်ငန်း ( လိုင်စင်အမှတ် - 697 )
အမှတ် လလ ၈၂ / ၈ ၊
၄၉ လမ်း နှင့် လမ်း ၅၀ ကြား ၊
စက်မှုဇုံ ( ၂ ) ၊
MBFB (Myanmar Best Food & Beverage) Co.,Ltd.ဘေး
Digital Chain Link Fence Machine
" Specifications "
Model : CLD-002
Cross wire diameter : 2.0mm - 3.0mm
Cross wire pitch : 70 mm
Cross wire length :5ft (1.524 M)
Operation speed : 15 M per minute
Electrical supply : 220 V , 1 phase
Motor (1) :2HP
Motor (2) : 0.5 HP
အောင်မြင်သောလုပ်ငန်းရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ -
နန်းမြင့် သံဇကာ စက်ကို သုံးကြစို့
မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့နေ့ဖြစ်ပါစေ ။
Digital သံဇကာ ချိန်းလိပ်စက်
၀ယျယူလိုသညျ့ အရအေတှကျ Meter(s)
For Artificial grass - artificial turf - synthetic grass - fake turf
Approximate Quantity Needed Meter(s)
May I get the quotation for "Artificial grass - artificial turf - synthetic grass - fake turf" ?